Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10: nantsi indlela esebenza ngayo kwimowudi yasebusuku | I-Androidsis
Le yindlela ephucula ngayo ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 emva kohlaziyo lwayo lwamva nje
Ngaphezu kwenyanga edlulileyo sikuxelele ngento entsha Imowudi yasebusuku apho umenzi waseKorea wayesebenza khona ukunika iflegi yakho icandelo elingcono lokufota kwiindawo ezinokukhanya okuncinci. Emva kokulinda ixesha elide, ekugqibeleni sinokukhuphela olu hlaziyo ukuphucula ikhamera ye-Samsung Galaxy S10.
Kwaye ngoku, imifanekiso yokuqala ipapashiwe ibonisa ukuba isebenza njani ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 emva kokubandakanya imo entsha yobusuku. Lumka, ukuphucuka kokusebenza kungaphezulu kokumangalisayo. Sikuxelela zonke iinkcukacha.
Ewe, ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 yenza ukufota okungcono kakhulu ebusuku emva kohlaziyo lwayo lwamva nje
Njengoko ubona kumfanekiso ophethe le migca, kwicala lasekhohlo sinendlela yoqobo ye Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10Ngelixa kwicala lasekunene sineziphumo ezifumanekayo emva kohlaziyo lokugqibela. Kwaye umahluko ungaphezulu kokumangalisayo.
Ukuqala, sibona a isandi esisezantsi kakhulu, ukongeza ekuboneni izinto ezichazwe ngakumbi, kunye nenqanaba lokukhanya elenza ukubamba kwiindawo ezingakhanyisi kakuhle kubonakale ngcono. Ngokuchanekileyo, ngasekhohlo inani likaDarth Vader alibonwa, ngelixa kwicala lasekunene liyabonakala ngokugqibeleleyo.
Kulo mzekelo wesibini, umahluko ubonakala ngakumbi. Sithetha ngomfanekiso othathwe ngemitha yokugqibela yokukhanya, kwaye siyabona ukuba icala lasekhohlo, elihambelana nemowudi eqhelekileyo, libonelela ngengxolo ephezulu kakhulu. Kodwa siyawubona umahluko omkhulu ekukhanyeni, kuba ifoto esekunene ibonisa indlela isivamvo sekhamera ye-Samsung Galaxy S10 ekwaziyo ukufaka ukukhanya okwaneleyo kwiifoto zasebusuku ukuphucula iziphumo. Kwaye konke ngokuqhubekeka kwesoftware!
Okokugqibela, siza kukubonisa umzekelo wesithathu wokufota ngaphandle kwindawo yasebusuku. Kwaye umahluko apha uyenza icace into yokuba, ukuba uneGPS S10, kuya kufuneka uhlaziye ngokukhawuleza ukonwabela izibonelelo zendlela yayo entsha yobusuku. Kubaqalayo, isibhakabhaka sincinci ngokungacacanga kwicala lasekunene, singasathethi ke ngokukhanya okupheleleyo kwifoto efakwe emva kokuhlaziya umfanekiso. Ikhamera ye-Samsung Galaxy S10. Kufanelekile ukutshintsha, akunjalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Le yindlela ephucula ngayo ikhamera ye-Samsung Galaxy S10 emva kohlaziyo lwayo lwamva nje